Serizy | Tantsaha anaty aterneto | January 2020
Ahoana ny fiarovana ny tsiranoka tsindrona avy amin'ny bibikely sy aretina
Ny fofona serizy (Prunus tomentosa) dia karazam-borona mahavelona izay tsy mihoatra ny telo metatra ny haavony. Noho ny voankazo amam-borona tsara tarehy tsara tarehy voalohany nokarakarain'ny mpamokarana tany Rosia, Okraina sy Belarosia. Ny tsaram-bary vita amin'ny tsiranoka no kely kokoa noho ny serizy tsotra, saingy tsy misy asidra fa nahazo fitiavana manerana an'izao tontolo izao izy ireo.
Ahoana no hampitombo ny kirihitra ao amin'ny zaridaina: fambolena, fandroana, fanongotra, akanjo
Raha tsy misy serizy, sarotra ny maminavina zaridaina tena izy. Saika any amin'ny tranokala rehetra dia maniry kiraro ao amin'ny zaridaina izahay. Ary matetika dia tsy iray ihany ny hazo, fa maro. Ny voankazo avy amin'ny serizy dia matsiro, mahasalama, aromatika, miaraka amin'ny tsirony mamy mahafinaritra, mahazatra ny maro hatramin'ny fahazazana. Ankoatra izany, ny kiraro dia tsara tarehy ary mijery ny voankazo rehetra.
Kiravavy: famaritana sy sarin'ireo varimbazam-boanio maitso
Mba hambolena tsaramaso ao amin'ny zaridaina, izay hifaly amin'ny voankazo be dia be, dia mila mandray andraikitra tompon'andraikitra amin'ny safidiny. Ary tokony tsy hanomboka hikaroka fanazavana momba ny habetsaky ny mamy sy ny mamy ny voankazo izay azonao ianao, fa tokony hifantoka amin'ny toetra toy ny fanoherana ny hafanam-po, ny fahatsapana ho an'ny aretina sy ny parasy, ny fahamatorana ary ny faharetan'ny voankazo.
Famaritana sy sarin'ireo karazany maro karazana kiriodana
Cherry dia ampahany amin'ny zavamaniry avy amin'ny karazana Plum avy amin'ny fianakaviana Pink. Amin'izao fotoana izao, ny mpamboly dia namoaka hybrides kiriodana sy serizy, izay miavaka amin'ny fanoherana ny hafanana sy ny aretina, ary koa ny haben'ny voankazo betsaka. Ny karazana cherry lehibe indrindra dia Miracle Cherry. Fantatrao ve? Ny kerobima voalohany avy tany Azia Minora ka hatrany Roma dia nampidirin'ny komandà sy ny tompony andevo Lucull.
Fambolena kiririoka mahatalanjona: endri-pambolena sy fikarakarana hazo maitso
Ny fofona serizy dia karazana volomparasy. Afaka mifangaro amin'ny paoziny, ny felany, ny kirokely, ny kiraro. Mankasitraka ny mpamboly amin'ny fanamafisana ny voankazo, ny fambolena azo tsapain-tanana, ny fanamafisana ny hafanana ary ny fananana trano tsara tarehy. Ny fofona serizy dia mora mamolavola sy mitazona, saingy mitaky fifehezana henjana amin'ny fomba fanao amin'ny fambolena.
Karazam-borona 10 be mpahalala miaraka amin'ny famaritana sy sary
Cherry - ny kolontsaina zaridaina mahazatra indrindra amin'ny latabay. Ny tanindrazin'io hazo io dia ny Caucasus sy Crimea. Tsy dia mendri-piderana izy io, mitombo amin'ny toe-javatra rehetra, ao anatin'izany ny distrikan'ny vato. Na izany aza, ny fari-pahaizana tsara indrindra amin'ny fitomboana sy ny voankazo dia tany lonaka sy tany lonaka. Noho ny asan'ny mpamboly zavamaniry, ny cherry dia mety manana tsirony sy loko hafa, ary samy manana ny toerany ny vary sy ny voankazo.
Karazan-tsakafo mahasoa ho an'ny vatan'olombelona
Cherry dia vokatra ankafizin'ny olona marobe, saingy tsy ny rehetra no mahatsapa ny toetra mahasoa an'ity mahazatra amin'ny voankazo rehetra ity. Ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny fomba hampiasana ny berry ho fitsaboana sy ny fomba tena ilaina amin'ny famokarana kirizy, dia hodinihintsika koa ny fanontaniana momba ny taolam-paty, ny fahasimbany ary ny tombony. Karazana kaloria sy fambolena Cherry dia mpikambana ao amin'ny fianakaviana Rosaceae, miaraka amin'ny hoditra matevina ary matevina manify.
Fanangonam-bokatra amin'ny lohataona - fitsipika ho an'ny mpangataka
Ny fanontaniana amin'ny famokarana serizy amin'ny lohataona dia iray amin'ireo fifanavorovoroana indrindra ho an'ny mpamboly za-draharaha sy mpandray anjara. Ireo farany dia tsy sahy manaloka ny sampana, satria matahotra ny hanimba ny fahaterahana sy ny fahamendrehana ilay hazo. Ireo mpikaroka profesora dia mihevitra io hadalàna io ary tsy takatr'izy ireo hoe nahoana ny olona maro no manao tsinontsinona izany fomba fiasa izany.
Ahoana no hamonjena ny kirizy amin'ny ririnina: varimbazaha samihafa
Ny Cherries dia iray amin'ireo voankazo mahasalama sy mahasalama indrindra ao amin'ny zaridainantsika. Ny fahavaratra dia tsy afaka manao izany raha tsy misy azy ireo. Ny ankamaroan'ny fitsaboana amin'ny fitehirizana kiraro amin'ny ririnina dia ny fianakaviana ary lova. Saingy mety hisy olona hahita zavatra vaovao amin'ny fanomanana kiraro. Misy fomba maro hikolokolo ny kiririoka amin'ny ririnina: ny angomamy manontolo, ny "vitamin", ny maina, ny maina, ny voankazo voarara.
Ny toetra sy ny endriky ny fambolena kiriolona "Turgenevka"
Ao amin'ny sehatra samihafa amin'ny mpamboly, ny cherry "Turgenevskaya" dia mirehareha amin'ny toerana, indrindra indrindra amin'ny adihevitra momba ny karazana vary: mamoaka ny sarin'ny hazo, ary mamela fanavaozana maro sy toro-hevitra momba ny voankazo mahavokatra. Hojerentsika ihany koa ny fomba hivelomana tahaka izany ao amin'ny zaridainanay. Cherney "Turgenevka": famaritana ny karazana vary Ny karazana kerobima "Turgenevka" dia niseho tamin'ny 1979 vokatry ny taona maro niasan'ny mpamboly ary tao anatin'ny taona vitsivitsy dia lasa iray amin'ireo malaza indrindra tamin'ireo mponina sy mpamboly fahavaratra.
Kirira varimbazaha tsapa amin'ny famaritana sy sary
Ny fofona serizy dia sampan-kazo mahatsiravina izay mahatratra roa metatra ny haavony. Manana satroboninahitra matevina, matevina izy na somary miparitaka kely, mihintsana ravin-ketsa sy ravina mena ary manopy mavo manodidina ny sampana. Ity hazo maniry mafy ity koa dia manohitra mafy tokoa ny bibikely sy ny aretina, na dia tahaka ireo karazany hafa aza dia manjò ny fanafihana coccomycose.
Fambolena cherry tsy misy voany ao amin'ny zaridaina, toro-hevitra tsara momba ny fambolena sy fiahiana
Kirsty sandstone Bessey dia avy any Amerika Avaratra. Eto dia mitombo eo amin'ny reniranon'ny renirano sy farihy izy io, ary indraindray dia mety ho hita eny amin'ny ala. Ny kirihitra Bessey malaza dia mety ho famolavolana lehibe ny saha rehetra. Noho ny famokaram-bary mamy be dia be dia be no nandresy ny fahatokisan'ireo mpamboly maro manerana izao tontolo izao.
Cherish na Duk: ahoana no hambolena sy hitombo
Ny tsiro mahafinaritra amin'ny kiririoka sy ny lelan'ny kiriodrialy ao anaty voankazo goavam-be iray - toy ny zavamaniry iray, afa-tsy amin'ny nofy, dia botanista iray. Saingy eo amin'ny natiora, azo atao ny zava-drehetra, ary na dia betsaka kokoa aza raha raisina ho an'ny fanatsarana ny fanangonam-boko tsy miankina. Vokatr'izany dia nomen'ireo mpamboly fahafahana hamboly ny demôkrasia na, araka ny niantsoana azy ireo, ny vilany.
Cherry "Mainty mainty": famaritana, fitsanganana sy fialan-tsasatra
Ny karazana voankazo dia tokony asongadina amin'ny serizy. Ny zavatra tsy vita avy amin'ny voankazo tamin'ity hazo ity: mifaninana, ny zava-pisotro, ny jirokely ary ny jams dia efa lasa lava toy ny mahazatra ao an-dakozia. Ankoatra izany, ny kiriodana mamy sy mamy dia matetika ampiasaina mba handravahana cakes na ho toy ny famenoana mofo, dumplings ary sakafo hafa.
Tsiambaratelo ny fanaovana sikla cherry any an-trano
Savorom-bolo marevaka, loko marevaka tsara tarehy, mofomamy mafana - dia mikasika ilay sary kiraro malaza manerana izao tontolo izao. Misy karazan-tsakafo maromaro mahazatra ho an'ny kiriodriam-bozaka homemade: zava-pisotro misy alikaola sy tincture tsy misy alikaola. Famafazana voankazo Tsy misy fepetra hentitra ho an'ny fifantenana karakam-kirindrina, saika isan-karazany no mety.
Cherry "besseya": ny fomba hiatrehana ny aretina sy ny bibikely ao amin'ny fasika kirihitra
Anisan'ireo karazana hazo sy karazam-borona maro azo mora hita any amin'ny dacha rehetra, mora ny mahita kodiaram-bary na, araka ny antsoina matetika hoe "Bessey" cherries. Tsy toy ireo karazany maro hafa, ity zavamaniry ity dia aseho amin'ny endriky ny ombin-tsambony marobe miakatra hatramin'ny 1,5 metatra ambony. Miankina amin'ny vanim-potoana, miovaova ny endriky ny satroboninahitra, na dia manavaka ny ravina kely misy ny tovovavy tanora, izay miloko mena, sy ny ravina vita amin'ny hoditra sy ny ravina maina, dia manavaka azy hatrany amin'ny ambim-bary sisa tavela amin'ny zaridaina.
Mampitombo ny kiririon'i Zhukovsky izahay ao amin'ny zaridainanay
Cherry Zhukovskaya dia nihevitra ny fiompiana tranainy. Ny karazana dia efa antitra ary matetika hita any amin'ny saha fambolena. Cherry Zhukovskaya, famaritana ny karazam-pahaizana momba ny foto-kevitra izay havoaka ao amin'ny lahatsoratra, araka ny fanamarihana dia manana toetra mahafinaritra mahafinaritra. Be dia be ny famokarana, ary tsy ilaina ny mampihatra ny ezaka manokana amin'ny fikarakarana hazo.
Tombontsoa sy zava-tsarobidin'ny kirikalin'i Lubskaya ao amin'ny zaridao
Misy karazana serizy maro be, izay mahazatra any amin'ny sehatry ny klimika. Ny lahatsoratra dia natokana ho an'ny kerobima Lyubskaya, izay nitombo tao amin'ny zaridainan'i Rosia hatramin'ny taona 1947. Andeha isika hiresaka momba ny fomba hisafidianana sy hambolena siramamy, andao hizaha ny fikarakarana, ny tombontsoa sy ny tsy fahampian-tsakafo. Fanoritsoritana ny kiririoka "Lyubskaya" manomboka amin'ny famaritana ny karazany.
Cherry "Ural Ruby": ireo karazana sy fambolena agrotechnics
Cherry "Ural Ruby" dia kirihitra kely iray mahatratra haavo metatra sy sasany. Saripika maro an'ity kerobima ity no aseho ao amin'ilay lahatsoratra. Io karazany io dia manana fandaniana tsara ary afaka mampifanaraka amin'ny toetr'andro sarotra. Tsy mitovy ny felam-boninkazo sy ny voankazo tsara miara-miasa.
Fambolena kirihitr'ilay fahagagana: toro-hevitra tsara momba ny fambolena sy fiahiana
Ny tantaran'ny kiririoka sy kiritr'ilay hybride dia nanomboka tamin'ny taonjato XVII taorian'ilay fanangonam-bokatra roa avy amin'ny voankazo roa. Noho ny asan'ny mpamboly, ny hybrida na ny tsimokaretina, araka ny niantsoana azy, dia lasa salama kokoa, manohitra ny toetr'andro ary afaka mamokatra. "Miracle Cherry": Famaritana sy toetra momba ny voankazo Ny Hybrid "Miracle Cherry" dia niseho vokatry ny asan'ny mpamboly Okrainiana L.
Copyright 2020 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Serizy